माओवादी र जसपा बीच एकताको घोषणा ! - News20 Media
May 15, 2021 N20LeaveaComment on माओवादी र जसपा बीच एकताको घोषणा !
काठमाडाैं, विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको उपेन्द्र– बाबुराम पक्ष दिर्घकालिन रुपमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
सबैतिरबाट नोक्सानी व्यहोरेका र सबैतिरबाट पराजित भएका प्रचण्ड अब के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र छ। एक हिन्दी फिल्ममा भनिएजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री ओली ‘बाजीगर’ भएका छन्। अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागे, त्यहाँ हारेर पनि जिते।
खोप ल्याउन सकियो भने कोभिडविरुद्धको लडाइँ जितिन्छ : प्रधानमन्त्रीओली
May 25, 2021 May 25, 2021 N20